သနပ်ခါးမေ: February 2012
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:36 AM ကိုရီးယား
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ မနှစ်က တစ်နှစ်လုံးအတိုင်းအတာအရ plastic / cosmetic procedure case ပေါင်း ခုနှစ်သိန်းခန့် ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီး ဦးရေရဲ့ ၁၅ - ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ မျက်နှာအစိတ်အပိုင်း ပြုပြင်ထားတဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါသတဲ့။
အမေရိကန်လို နိုင်ငံကြီးမျိုးမှာတောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်လိုက်တဲ့ အခါ cosmetic procedure ပြုလုပ်တဲ့ အရေအတွက် ပိုနည်းနေပါသေးတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အလှအပဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခွဲစိတ်မှုခံတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဆို ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြပေမယ့် ဒီမှာတော့ အနုပညာရှင်များသာမက၊ နိုင်ငံရေးသမားများပါ ပြုပြင်ခွဲစိတ်မှု လုပ်ကြပါတယ်။
မြေအောက်ရထားမှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ ပလက်စတစ် ဆာဂျူရီ ဆေးခန်း ကြော်ငြာပါ။
အထူးတလည်ရိုက်နေတော့ လူတွေက ဘုရှိုးရှိုးသွားတယ်။
ပြုပြင်တဲ့သူတွေအထဲမှာ အသက်၃၀အောက်အရွယ်တွေက အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တာ ကာလထဲ အထက်တန်းစာမေးပွဲဖြေ အပြီး တက္ကသိုလ်မခင်အချိန်လေးမှာ ပိုပြီးလုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ ရာသီမှာ cosmetic surgery ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေက ကလေးတွေ နှာခေါင်းရိုးထည့်တာ နဲ့ မျက်ရစ်ဖော်တာ နှစ်မျိုးလုပ်ရင် အမေတွေကိုလည်း အထက်တန်းစာမေးပွဲ အတွက် အပင်ပန်းခံရကျိုး နပ်အောင် မျက်နှာတင်းစေတဲ့ဆေး botox ထိုးတာကို discount ချပေးကြပါတယ်။
အများဆုံးလုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေက (Rhinoplasty) နှာခေါင်းရိုးထည့်တာ ၊ (Double- eyelid surgery) မျက်ရစ်ဖော်တာတွေပါ။ တခြားနိုင်ငံမှာ လုပ်လေ့မရှိတဲ့ ပါးရိုးမို့အောင် ခွဲစိတ်တာ၊ မေးရိုးပြင်တာနဲ့ ခြေသလုံးသေးအောင် ခွဲစိတ်တာလည်း အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားကြပါတယ်။
ကိုရီးယားမှာ ခွဲစိတ်တာက အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အများကြီးဈေးသက်သာတယ်ဆိုပေမယ့် အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ ဈေးကြီးတဲ့ထဲမှာ ပါပါတယ်။
Girls Generation မှ Sunny
မပြန်ခင်လေး လုပ်သွားရင် ကောင်းမလား? အကုန် ဝိုင်းရိုက်ကြမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ :D
ဘုရားပေးတဲ့ ရုပ်လေးပဲကောင်းပါတယ် နော?
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:39 AM ကိုရီးယား
မြတ်ကြည်လုပ်ထားတာလေးတွေပါ။ စားကြပါနော်။ ပြီးတော့ မြတ်ကြည်ပဲစားသည်။ ဟီဟိ :D တစ်ယောက်တည်းပဲရှိသည်ကိုး။ Scottish Egg, ဝက်သား ကြက်ဥအစာသွတ် ချက်နည်းကို ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ တစ်ဖုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့တစ်သွယ် တင်ပေးတတ်တဲ့ ညီမလေး ဘရဏီ ဆီကယူပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကြက်ဥပူတင်းမုန့်ပါ။ စတော်ဘယ်ရီမရှိလို့ လိမ်မော်သီးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ တူတော့မှာပဲ။ :P
မုန့်လုပ်နည်းလေးက ဒီမှာ ရှိပါတယ်။
မြတ်ကြည်လေ နှစ်ရက်ရှိပြီ။ ဘုံပျောက်နေတာ။ ပထမရက်က minor လေးနှစ်ခုပြီးလို့ စောပြီးလို့ ပြန်လာတာ၊ ကြမ်းခင်းတွေ ဖယောင်းတိုက်နေလို့တဲ့၊ ပေးမဝင်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ချွေးထုတ်ခန်းမှာသွားနေရတယ်။ ဆိုးပါ့။
အဲဒီက ရောင်းတဲ့ ရေနွေးကြမ်း
အားဂျောရှိ နဲ့ အဖွဲ့ကျရင်း ကြက်ဥပြုတ် စား
နောက်ရက်ကလည်း OT မရှိဘူးဆိုတော့ ဒီနေ့အေးအေးဆေးဆေးနားမယ်ပေါ့။ ပြန်လည်းလာရော၊ ခုံတွေသန့်ရှင်းရေးတဲ့။ ဒါနဲ့ တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ အိမ်သာဥယျာဉ်သွားမယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်မယ်လို့စိတ်ကူးတာ၊ စဉ်းစားကြည့်တော့ တဝေါ့ဝေါ့ဖြစ်နေပါဦးမယ်လေ။
အဲဒါ ဆိုးလ်မြို့ အီဟွာ တက္ကသိုလ်က ညီမလေးတစ်ယောက်ဆီ ခြေဦးဆန့်လိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ဆိုတော့ ကျောင်းအဝင်လမ်းမှာ ဖက်ရှင်ဆိုင်တွေ အများကြီး တန်းစီရှိတယ်။ ဒီဇိုင်းတွေလှတယ်၊ ဈေးလည်းလှတယ်။ :) အီဟွာသူတွေ ပေါင်တံသွယ်တာ နာမည်ကြီးတယ်လို့တော့ မမကျူတီပြောတာ ကြားဖူးတာပဲ။
အင်္ကျီက ကုတ်အောက်မှာပဲ သုံးထပ် :P
ညနေ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးမှ အခန်းပြန်လာတာ။ War Horse ဆိုတာ။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ Online မှာကြည့်လို့ရပြီနဲ့ တူတယ်။ Steven Speilberg ရိုက်တာဆိုတော့ လက်မလွှတ်ဘဲ ကြည့်သင့်တဲ့ ကားလေးပါ
War Horse ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်း
ရေးရင်း၊ ရေးရင်းနဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီတစ်ပတ်တော့ ပို့စ် ကောင်းကောင်းလေးတွေ မရှာဖြစ်တာနဲ့ မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး။
စာဖတ်သူများ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:47 PM ဖက်ရှင်
အကယ်ဒမီ ပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေက တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ဆန်းပြားလာတာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အကယ်၍ ဝတ်စုံတွေထဲက တစ်ခုကို ရွေးရမယ်ဆို ဒါလေးက လှတယ်၊ ဒါလေးကတော့ မလှဘူး စိတ်ကူးထဲမှာ အမှတ်ပေးကြည့်လို့ရအောင် ကျွန်မ တူရာ တူရာလေး တွေကို စုပေးထားပါတယ်။ ပုံတစ်ခုချင်းကိုနှိပ်ပြီး အကြီးချဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။
မေသန်းနု (လှတုန်းပါပဲ) ပန်းသုံးပွင့်နဲ့ ဖြိုးသီရိခေတ် :P
လှအဉ္စလီတင့် (ပုဇွန်ထုပ် ကလေးနဲ့တူတယ် ) ဂန္ဓဝင်
ကေကေမိုးမြင့် တဲ့ မေသဉ္ဇ^ဦး
ဖူးစုံ ခေါင်းပေါ်မှာ အတောင့်လိုက်ပဲ :D
အဝတ်ဒီဇိုင်းကြောင့် ဗျိုင်းဖြစ်သွားသည် :P
Little riding hood ချစ်သုဝေ သီရိရှင်းသန့်
အကျီပေါ် ကပ်လာလိုက်တယ် :D စုလှိုင်နှင်း
လက်တစ်ဘက် ဖက်ရှင် စံရတီမိုးမြင့်
မိုးယုစံ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် အတောင်ပံတွေကို ဖြန့်ပါလို့:P
အိုး ဆန်းဆန်းပြားပြား @_@
အတွန့်များနဲ့။ တွန့်လေ ကောင်းလေ။ :P
တော်တော်လန်းတယ်များထင်လား မသိ ချမ်းမီမီကို (ချုံခိုတိုက်မလို့တဲ့ :P)
နဂါးနှစ်ဆိုတော့ နဂါးကြီးနှင့် ပြောင်တောင်တောင်ဗေဗေ့ဂျိ
မောင့်ကျက်သရေခေါင်းပေါင်း leather တိုက်ပုံနဲ့ မွဲ နေသူ
ပြာလိုက်လေ အစိမ်းတောက်တောက်နဲ့ လိုက်သူရှားသော်ငြား
အနက်ရောင် တိုက်ပုံတော့ တော်တော်ဝတ်ကြပါတယ်။
ဒီနှစ် အကယ်ဒမီ ဝတ်စုံလေးတွေကို ရှာ တွေ့မိသလောက်ထဲမှ ပြန်စုထားတာပါ။ စာဖတ်သူတွေလည်း အမှတ်ပေးပြီးကြပြီဟုတ်? အကြိုက်ဆုံးနဲ့၊ မကြိုက်ဆုံး ဝတ်စုံကို ကော်မန့်မှာ အဆင်ပြေမယ်ဆို ရေးပေးသွားကြပါနော်။ :)
နောက်နှစ်မှာ ရင်ကြားစေ့မှာ ခန့်ထားရမယ့် မင်းသမီးကြီးလို ဝတ်လာသူတွေ မများပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းပါရစေ။ ဓာတ်ပုံတွေကို Eleven Media Group Page နဲ့ MRTV-4 မှ ယူပါတယ်။
စာဖတ်သူကို ပြုံးစေဖို့ ကျွန်မ ရွှတ်နောက်နောက်လေးတွေ ရေးသားထားပါတယ်။ နစ်နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိကြောင်းပါရှင်။ :)